Sei isu Sarudzai
Aluminum Profiles (OEM / machine)
Aluminum tsikwa Parts
Akatungamirira Tube chikomboredzo Profiles
About Kuita Zvandakashanda
About Place imwe Order
Pamusoro machine Service
Pamusoro Quality Control
Pamusoro Aluminum Package
Uri fekitari kana kutengesa kambani? Ndiudze basa rako?
Tiri fekitari iyo yave nyanzvi aruminiyamu kubudiswa kugadzira kwemakore anopfuura 10, akadai maindasitiri vasiri mwero zvinhu, aruminiyamu vachinyatsogona zvikamu, aruminiyamu oxidation, kupisa singi, aruminiyamu sikuruwa etc.
Chii wako zvakanakira uye kuti andiregerere? Kunodiwa? Pane MOQ
We zvinopa OEM basa aruminiyamu kubudiswa pamwe fekitari mutengo hwakanakisisa. Hurongwa kwacho ndechokuti imi kutumira kuswedera kwatiri, uye tichadaro ongororo mufanidzo yako uye mashoko kwamuri kwakavakirwa MOQ makazvireva. (No MOQ waida, asi mutengo miduku rwaizova kupfuura guru uwandu)
Sei garandi chezvinhu yepamusoro kuzvidzora?
Tichibatisisa sungisa unhu nokudzora kubva pakutanga kusvikira pakuguma uye vanonanga pa 100% chikanganiso akasununguka. Unogona zvinoda kuti pashure-sale vatengi kana paine dambudziko. murayiro wose anofanira vakayambuka yedu QC wedhipatimendi vasati kutumirwa.
Unoziva anopa ivhu? Zviri pachena kana dzimwe?
Hongu, tinogona kupa mharidzo pachena muripo asi regai kubhadhara mari mitoro, uye chinangwa nokutuma ivhu kwamuri kuongorora zvinhu unhu hwedu uye rwokugadzira rikurumidze.
Sei kuva nzira kana Ndinoda kuti kumumvuri?
Kana uine vanodhirowa kana ivhu, tapota inzwa wakasununguka titumirei, uye anotiudza chaiwo zvinodiwa dzenyu zvakadai zvinhu, kushivirirana, pemvura kurapwa uye mari rwaunoda.
Sei iwe anotakura zvigadzirwa? Rinhiko yenyu nguva pakusununguka?
Kana mharidzo kugadzira, kazhinji anenge 5 ~ 10 mazuva, asi zviri maererano uwandu uye zvigadzirwa complicated.We aigona anotakura pavo dhl, EMS etc. Kana guru kuti pave zvigadzirwa, tichaita anotakura wavo FOB , kukurukura nguva anobva munyika zvaungada anotakura, asi fungidzira mazuva anenge 25 mazuva.
Kupi fekitari yako iri? Ndingaita sei kushanyira nayo?
boka redu riri mu Jiji Industrial rokufambira, Shanghe Village, Wangniudun Town, Dongguan City, inova pedyo kubva Shenzhen, Guangzhou, kong guta.